कक्षा सातमा पढ्ने किशोरीले बच्चा जन्माए पछी………………. – Khabar Patrika Np
कक्षा सातमा पढ्ने किशोरीले बच्चा जन्माए पछी……………….
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २५, २०७८ समय: १८:५१:०३
यो घटना भारतको हो । त्यहाँ पश्चिम बंगालमा सात कक्षामा पढ्ने बालिकाले बच्चा जन्माएकी हुन् । १३ वर्षीया बालिकालाई ब्ल्याकमेल गरेर सहपाठीले सम्बन्ध बनाएको खुलासा भएको छ । घटनापछि आ रो पी सहपाठी आफ्नो परिवारको साथमा बंगालादेश भा गे का छन् । आरोपीका हजुरबुवा बंगलादेशमा बस्ने गरेका छन् ।